အမေးအဖြေများ | Tianjin Yixin ပိုက်ပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက်
A: ၎င်းသည်ပိုက်လိုင်း၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလိုအလျှောက်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ overhead welding၊ အလျားလိုက်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဒေါင်လိုက်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပြားချပ်ချပ်ဂဟေဆက်ခြင်း၊ ၎င်းသည်လက်ရှိအဆင့်မြင့်ပိုက်လိုင်းဂဟေဆော်စက်ဖြစ်သည်။ ပိုက်သည်ပုံသေသို့မဟုတ်အလှည့်ဖြစ်ပြီး၊ ဂဟေဆော်သောတွန်းလှည်းသည်အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ရန်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်သည်။
A: ၁၁၄ မီလီမီတာအထက်ပိုက်နှင့်နံရံအထူ ၅.၅၀mm အတွက်သင့်တော်သည် (HW-ZD-200 သည် ၅ မှ ၁၀၀ မီလီမီတာအထူရှိသောနံရံကိုဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်) ။
Q. ဂဟေဆော်ခြင်းကို X-Ray နှင့် ultrasonic တို့မှရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်တယ်၊ GTAW ကို root အဖြစ်လက်ဖြင့်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဂဟေဆော်မှုဖြစ်စဉ်သည်အားနည်းချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရိုက်ကူးခြင်းစသည့်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
A: ပဉ္စမမျိုးဆက်အားလုံး - အနေအထားအလိုအလျှောက်ဂဟေဆော်သောတွန်းလှည်း၊ တင်သွင်းသောဂဟေဆော်နိုင်သည့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်၊ ဝါယာကြိုးသွယ်တန်းရန်၊ ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်သူ၊
A: ဟုတ်သည်၊ ပိုက်အချင်းသည် ၁ မီတာထက်ပိုရမည်သို့မဟုတ်အော်ပရေတာကပိုက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်အချင်းလုံလောက်သည်။
A: ၎င်းကို ၁၀၀% ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ရောနှောခြင်း (၈၀% အာဂွန် + ၂၀% ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်) ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဂဟေဝါယာကြိုးသည်အစိုင်အခဲ -cored သို့မဟုတ် flux-cored ဖြစ်သည်။
A: ၃-၄ ထက်ဂဟေဆော်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကပိုမြင့်နိုင်တယ်။ ဂဟေချုပ်ချုပ်သည်လှပစွာပုံဖော်ထားသည်။ စားသုံးသူများစားသုံးမှုအနိမ့်သည်။ အခြေခံဂဟေအချက်များပါသောဂဟေဆော်သူတောင်မှ၎င်းကိုများစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂဟေဆော်သူအမြောက်အများကိုစျေးနှုန်းမြင့်မားစွာငှားရမ်းခြင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
ဖြေ။ ။ အပူချိန် ၃၀၀ ဒီဂရီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ သံလိုက်တိမ်နစ်သွားတာမရှိဘူး။ သံလိုက်ဆွဲအားက ၅၀ ကီလိုဂရမ်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်သေးတယ်။
A: overhead welding ဆိုသည်မှာအခြေခံဂဟေဆော်ရာနေရာ ၄ ခုအနက်အလွန်ခက်ခဲသောဂဟေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အောက်ပိုင်း overhead welding အတွက်အရည်ပျော်သောသံကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်။ အဆင့်အတန်းနှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများဖြစ်သည်။ Yixin ပိုက်လိုင်းအားလုံး - အနေအထားအလိုအလျှောက်ဂဟေဆော်သောစက်ပစ္စည်းသည်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ဂဟေဆော်ပုံသဏ္beautifulာန်သည်လှပပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောနှုန်းသည်မြင့်မားသည်။
အဖြေ - အိမ်တွင်း (သို့) လယ်ကွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သံမဏိပိုက်များ၊ stainlessရာမပိုက်များ၊ သံမဏိပိုက်များ၊ အနားကွပ်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ တံတောင်ဆစ်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းဂဟေဆော်ခြင်း၊
A: မှန်ပါသည်၊ ၎င်းသည်ခိုင်ခံ့ပြီးအကြမ်းခံသည်။ အထူးသဖြင့်ပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာ၏အလုပ်ကြိုးစားမှုအတွက်သင့်တော်သည်။
A: တပ်ဆင်ခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သင့်မှာအခြေခံဂဟေဆော်လျှင် ၁-၂ ရက်အတွင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းသင်တန်းသို့မဟုတ်ကွင်းဆင်းလေ့ကျင့်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုများကိုပင်ပေးနိုင်ပါသည်။
လည်ပတ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်လိုအပ်ချက်များရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ နေရာလွတ်ကပိုက်ပတ်ပတ်လည်မှာ ၃၀၀ မီလီမီတာရှိတယ်။ ပိုက်၏အပြင်ဘက်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသောသို့မဟုတ်လျှပ်ကာအလွှာရှိသည်။ လမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အကြံပြုသည်။ ၁၀၀၀ မီလီမီတာထက်ပိုသောပိုက်အချင်းရှိသောပိုက်များအတွက်လည်းလမ်းကြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်၊ တွယ်ကပ်ယာဉ်သည်ပိုမိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရန်နှင့်ဂဟေဆော်အရည်အသွေးမြင့်မားရန်လည်းအကြံပြုသည်။
A: ဒေါင်လိုက်ဖြစ်စေ၊ အလျားလိုက်ဖြစ်စေဂဟေဆော်နိုင်သည်။
Q. အသုံးများသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများကဘာတွေလဲ။
A: စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများ - ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုး (အစိုင်အခဲ core ဂဟေဝါယာကြိုးသို့မဟုတ် flux-cored ဂဟေဆော်သောဝါယာကြိုး)၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်သို့မဟုတ်ရောနှောဓာတ်ငွေ့); အားနည်းချက်ရှိသည့်အစိတ်အပိုင်းများ - အဆက်အသွယ်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ၊ nozzles စသည်တို့ (သမားရိုးကျအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို hardware market တွင်ရနိုင်သည်) ။
မေး။ (အချင်း၊ အမျိုးအစား)
A: Flux ဝါယာကြိုး: 0.8-1.2mm
Q: ပိုက် bevels ပြင်ဆင်မှုအတွက်ပိုက်မျက်နှာဖုံးစက်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါသလား။
Q: ဂဟေဆော်ရန်မည်သည့်အဆစ်အမျိုးအစားလိုအပ်သည် (U / J နှစ်ဆ J / V သို့မဟုတ် bevel joints?)
ဖြေ။ ဂဟေဆော်သောဂေါက်သီးလုံးသည် ၂၃၀ မီလီမီတာ * ၁၄၀ မီလီမီတာ * ၁၂၀ မီလီမီတာနှင့်တွန်းလှည်း၏အလေးချိန် ၁၁ ကီလိုဂရမ်ရှိသည်။ အလုံးစုံဒီဇိုင်းသည်ပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
A: Swing Speed ​​ကို 0-100 ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ Swing width ကို 2mm-30mm ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
A: ကုမ္ပဏီသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပိုက်လိုင်းအလိုအလျောက်ဂဟေဆော်သောပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းကို ၁၂ နှစ်ကျော်ကြာအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီးဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်5အဆင့်မြှင့်အဆင့်ဆင့်ခံခဲ့သည်။ ပိုက်လိုင်းဂဟေဆော်သောကိရိယာအသစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်တည်ငြိမ်ပြီး၊ ဂဟေဆော်မှုအရည်အတွက်သည်မြင့်မားပြီး၊ ဂဟေဆော်သည်လှပသည်။ စျေးကွက်တွင်အတုများစွာရှိသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ထားပြီးအရည်အသွေးကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။